सदर चिडियाखाना खुल्यो
बिहीबार, १५ माघ, २०७७
किसानको आठ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिर्ने चिनी मिल सञ्चालक पक्राउ
महिला सञ्चारकर्मीलाई मानव अधिकार र पत्रकारिता तालिम
इलाममा निर्वाचनको तयारी सुरु
टोटनह्याम र लिभरपुल भिड्दै
चौदण्डीगढीको पोस्टमा वालिङको दस गोल, रुथको दोहोरो ह्याट्रिक
मनमोहन मेमोरीयल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलित
ट्राफिक लाइट हस्तान्तरण
‘नाग देवता’ भन्दै सर्पको पूजा
धनकुटालाई उछिन्दै भोजपुरे सुन्तला, बङ्गलादेशसम्म निर्यात
शरीरमा हेमोग्लोबिन स्तर बढाउन यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी
मुख्य पृष्ठवाग्मती समाचारसदर चिडियाखाना खुल्यो
काठमाडौँ/गतवर्ष चैत ७ गतेदेखि बन्द भएको ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भएको छ ।
सदर चिडियाखानाका प्रमुख डा. चिरन्जीवी पोखरेलले बन्द भएको नौ महिनापछि चिडियाखानालाई खुल्ला गरिएको बताए । चिडियाखाना दैनिक बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खुल्ला गरिने छ । एकपटकमा आठ सयजनासम्मलाई प्रवेश दिइने पनि डा. पोखरेलले बताए ।
चिडियाखाना घुम्न जाने व्यक्ति बढीमा डेढ घण्टासम्म भित्र बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । घुम्न आउनेले मास्क अनिवार्य लागाउनुपर्ने छ भने चिडियाखानाभित्र प्रवेश गर्दा हात सेनिटाइज गर्नुपर्ने, जुत्ता निसंक्रमण गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था पनि गरिएको डा. पोखरेलले बताए ।
यस्तै चिडियाखानाभित्र जनावरको नजिक जान, पार्कमा बसेर खान, वन्यजन्तुलाई खुवाउन र छुन पाइने छैन भने बालबालिकालाई खेलाउन नपाइने नियमसमेत बनाइएको छ ।
चिडियाखाना अवलोकन गर्न आउनेहरु पनि लामो समयपछि चिडियाखानाभित्र घुम्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन् । पूर्णरुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी जनावरहरुको अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले असुरक्षा महसुस नभएको पनि उनीहरुले बताए ।
नेपाल सरकारको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को निर्णयपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना गरी बिहीबारदेखि चिडियाखाना खुल्ला गरिएको हो । चिडियाखाना अवलोकनका लागि घरबाटै टिकट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
काउन्टरबाट टिकट खरिद गर्दासमेत अनलाइन टिकट प्राप्त हुने छ । चिडियाखानामा अवलोकन गर्नका लागि एक सय ५० रुपैयाँ टिकट दर निर्धारण गरिएको छ भने नेपाली विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि ९० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।